भरतपुर अस्पतालमा अनलाइन टिकटको तयारी – Health Post Nepal
भरतपुर अस्पतालमा अनलाइन टिकटको तयारी
२०७५ चैत २६ गते १६:३२
बिरामीको सहजता र सुलभ सेवालाई ध्यानमा राखेर भरतपुर अस्पतालले अनलाइन टिकटको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्योपचारका लागि टिकट लिन लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न अस्पतालले अनलाइन टिकटको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
भरतपुर अस्पतालको ५६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले अनलाइन टिकटका लागि प्राविधिकहरूसँग सहकार्य भइरहेको बताए । उनका अनुसार एक–दुई महिनामा अनलाइन टिकटको व्यवस्था गर्ने गरी काम भइरहेको छ । यो सेवासँगै बिरामीले टिकट लिनका लागि लामो समय लाइनमा बस्नुनपर्ने उनको भनाइ छ । तर, इन्टरनेटको पहुँचमा नरहेका बिरामीलाई भने यो सेवा प्रभावकारी नहुने देखिएको छ ।
वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा भरतपुर अस्पताललाई मेडिकल कलेज बनाउने लक्ष्य राखेको डा. पौडेलले बताए । अस्पतालका भावी योजना सुनाउनेक्रममा मेसु पौडेलले गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै मेडिकल कलेजको स्थापना गर्ने बताएका हुन् । उनले यसका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति अस्पतालभित्रै उपलब्ध रहेको दाबीसमेत गरे ।
वीर अस्पतालपछि सबैभन्दा धेरै शय्या भएको भरतपुर अस्पतालले सेवाको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिएको पौडेलको दाबी छ । उनले अस्पतालबाट पछिल्लो ८ महिनामा गरिब तथा असहाय बिरामीलाई १ करोड ४० लाख रूपैयाँबराबरको सेवा निःशुल्क दिइएको जानकारी दिए ।
यस्तै, संघीय सांसद कृष्णभक्त पोख्रेलले भरतपुर अस्पताललाई देशकै नमुना मेडिकल कलेजका रूपमा विकास गर्ने बताए । नेपालको कानुनले सबै नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले त्यसअनुसार काम गर्नुपर्ने समय आएको पोख्रेलको भनाइ थियो ।
संघीय सांसद उमा रेग्मीले अस्पतालभित्र हडताल गर्ने वातावरणको अत्य गर्नुपर्ने बताए । अस्पतालले बिरामीलाई गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्ने भन्दै उनले स्वास्थ्यसेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा भरतपुर अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष खिमलाल भण्डारी, जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत, नेकपाका जिल्ला नेता तेजेन्द्र खड्का, नेपाली कांग्रेस चितवनका सचिव उत्तम जोशी, संघीय समाजवादी फोरमका जिल्ला अध्यक्ष प्रेम भुजेल, राजपा नेपालका जिल्ला अध्यक्ष प्रेमकुमार श्रेष्ठलगायतले धारणा राखेका थिए । उनीहरूले भरतपुर मेडिकल कलेजसित लिने गरेको भाडामा पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा अस्पतालले वार्षिक रूपमा प्रकाशन गर्ने स्मारिककाको विमोचनसमेत गरिएको थियो ।
२०२० सालमा स्थापना भएको भरतपुर अस्पतालले अहिले ५ सय ४० शय्यामार्फत बिरामीलाई सेवा दिइरहेको छ । अस्पतालमा १३ वटा मेडिकल विभाग सञ्चालनमा छन् ।